शुक्रबार जन्मनेको भुत,भविष्य र वर्तमान यस्तो हुन्छ ! एकपटक अवश्य पढेर सेयर गरौं – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/शुक्रबार जन्मनेको भुत,भविष्य र वर्तमान यस्तो हुन्छ ! एकपटक अवश्य पढेर सेयर गरौं
मानिसहरुमा विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ ।। यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्व माथि हुने गर्दछ त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् ।
ज्योतिष श्री प्रनिशजङ्गले शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिहरुको निम्नलिखित गुणहरु बताएका छन्ः
१२. तपाईंले प्रत्येक कुराहरुमा सफलता निकै ढिलो पाउनुहुन्छ तर जब पाउनुहुन्छ स्थायी रुपमा पाउनु हुन्छ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईं मेहनती हुनुहुन्छ र संघर्ष गर्न सक्नुहुन्छ ।
पाल्पामा खिर खाँदा २८ जना बिरामी, सबै अस्पतालमा भर्ना
ब्राम्हण जातीलाई गाउँले भाषामा टपरे बाहुन भनिन्छ – डा . बाबुराम भट्टराई